Pegasus yendege yeTurkey inotanga ndege kuenda kuMedina neBatumi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Press zvinoburitswa » Pegasus yendege yeTurkey inotanga ndege kuenda kuMedina neBatumi
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Georgia Kuputsa Nhau • nhau • Press zvinoburitswa • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Turkey Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Ndege yeTurkey Pegasus inoenderera mberi nekuwedzera network yayo nekumisikidzwa kwenzira mbiri nyowani. Kuvhurwa kweMedina kuchaita kuti Pegasus ive yechina yekuenda kuSaudi Arabia, kuwedzera kune Dammam, Jeddah neRiyadh, nendege dzakatangisa musi wa12 Ndira 2020. Pegasus iri kuvhurawo ndege kuenda kuBatumi, nzvimbo yayo yechipiri kuGeorgia mushure meTbilisi, se ya29 Kurume 2020.
Kubatanidza ndege kuMedina kunowanikwa kubva kuLondon Stansted neManchester Airport. Pegasus'ndege dzinoenda kuMedina dzichasimuka kubva kuLondon Stansted kuburikidza neIstanbul Sabiha Gökçen kuenda kuPrince Mohammad Bin Abdulaziz Airport neMuvhuro, China neChishanu, vobva kuManchester Airport neMuvhuro neSvondo. Ndege dzinodzoka dzichabva kuPrince Mohammad Bin Abdulaziz Airport kuenda kuLondon Stansted neManchester kuburikidza neIstanbul Sabiha Gökçen neMuvhuro, Chipiri neChishanu.
Ndege kuenda kuBatumi dzichawanikwa kubva London Stansted kuburikidza neIstanbul Sabiha Gökçen. Ndege dzaPegasus pakati peIstanbul neBatumi dzichasimuka kubva kuLondon Stansted kuburikidza neIstanbul Sabiha Gökçen kuenda kuBatumi Airport neMuvhuro, Chitatu, Chishanu neSvondo nzira mbiri.